Tombontsoa / fatiantoka ary karazana vozon'akano-hoditra | Tontolo alika
Betsaka amintsika no mahalala fa mety tsy hahafinaritra ny alika rehefa mibontsina ary vao mainka aza raha manao izany tsy tapaka ary rehefa mitranga ireo tranga ireo dia matetika ny safidy voalohany dia ny an'ny anti-vozon'akanjoko, satria hanampy antsika hanitsy izany fihetsika tsy mendrika ananan'ny biby fiompintsika izany, tsara ve ny mampiasa vozon'akanjoko manohitra ny hodi-kazo na ny mifanohitra amin'izay manimba?
Ao an-tsena dia misy a karazana modely marobe amin'ny vozon'akanjoko manohitra ny hodi-kazo, na dia manana ny firafitra sy ny asany aza ny ankamaroan'izy ireo, ka ny estetika sy ny fikirakirany ihany no miova.
1 Inona no atao hoe vozon'akanjo?
2 Karazana vozon'akano hodi-kazo
2.1 Rojo Citronella
2.2 Rojo ultrasound
2.3 Volombava elektrika
3 Ny vokatra tsara sy ratsy ateraky ny vozon'akanjaka dia mety hiteraka ny alikanay
Inona no atao hoe vozon'akanjo?
PetKing Premium Collar ...
Rojo Meloive ...
Collar anti-baomba ...
Nakosite PET2433 Ny tsara indrindra ...
Rojo ara-dalàna tanteraka izy io, miaraka amin'ny tsy fitovizany ao anaty boaty elektronika kely iray izay mahay mamantatra ny feo avoakan'ny alikantsika, na mihombo na mierona.
Rehefa mahatsikaritra fangirifiriana ny elektronika vozon'akanjoko dia mamoaka feo aloha izy hanairana ny alika. Raha tsy mandinika ny feo ny alikanay ary manohy ny fihorakorahany, dia ny vozon'akanjo hamoaka hovitrovitra izay hivadika ho tohina herinaratra amin'ny farany hampatahotra azy izany mandra-pijanonany tsy hiteny intsony.
Karazana vozon'akano hodi-kazo
Matetika isika no mahita magazay na tranokala mivarotra vozon'akanjo fanoherana ny hodi-kazo, na izany aza ary izay tsy lazain'izy ireo amintsika mihitsy dia izany misy karazana rojo samy hafa ary samy manana ny asany manokana ny tsirairay.
Ity dia vozon'akanjo azo aroso amin'ny alika kely, nanomboka tsy misy tohina amin'ny herinaratra.
Ity vozon'akanjo ity dia misy kaontenera iray izay miasa toy ny tsifotra ary isaky ny moka ny alika dia mamoaka citronella be dia be izy, mamoaka fofona mahery vaika izy io ny anana miaraka amin'ny tsiro voasarimakirana isaky ny moka ny alika, fa tsy manimba ity spray ity dia somary mahazo aina ihany ny biby fiompinay.
Imbetsaka io fomba io dia mandaitra kokoa noho ny fomba elektrika na amin'ny feo satria ny fofon'ny citronella dia tena tsy mahafinaritra amin'ny alika, ankoatr'izany dia vozon'akanjo tsy mampidi-doza izy, satria tsy miteraka fiatraikany mivantana amin'ny vatan'ny alikantsika toy ny amin'ny vozon'akanjo hafa.
XIAXIA 2023 Antiladridos...
Ity rojo ity mampiasa sensor izay afaka mamantatra tabataba sy feo, ary rehefa mitranga izany dia mamoaka feo avo be izay tsy henontsika fa ny alika no mandre, rehefa manomboka moka ny alikantsika dia hanjary hanelingelina azy io feo io ka hijanona tsy hivily izy.
Tsy isalasalana fa iray amin'ireo safidy tsara indrindra amin'ny collars anti-bark eo akaikin'ny rojo voasarimakirana citronella, fa misy ny tsy itovizany ihany amin'ny vidiny.
Ity dia vozon'akanjo fanoherana ny hodi-kazo atolotra ho an'ny alika lehibe. Izy io dia miasa amin'ny alàlan'ny famoahana fikorontanana elektrika kely raha vao mahatsikaritra ny feon'akanjo, mampiasa herinaratra ambany dia ambany izay tsy handratra ilay biby.
Ity rojo ity koa Izy io dia be mpampiasa amin'ny fiofanana momba ny biby na fiofanana.
Ny vokatra tsara sy ratsy ateraky ny vozon'akanjaka dia mety hiteraka ny alikanay
Amin'izao fotoana izao, tsy misy fanadihadiana manamafy fa ny fampiasana vozon'akanjo fanoherana ny hodi-kazo dia mahasoa ho an'ny alika, ary inona koa? ny mifanohitra amin'izay no izy. Matetika ny fotoana alehan'ny alikantsika dia misy antony manokana io, na ny fihenjanana, ny tahotra, ny fanahiana na ho fampitandremana.
Raha mahazo tohina herinaratra ny alika rehefa mivovo, tsy ho fantatrao ny antony mahatonga anao mahazo sazy ary kely kokoa izay manasazy azy, noho izany dia hamela azy ho very hevitra be fotsiny isika ary tsy hatoky tena.
Mety manomboka matahotra ny biby fiompintsika ary lasa lasa ireo tahotra ireo fitondran-tena tsy tia ady sy mahery setra kokoa aza.
Ny hany tombon-tsoa azo avy amin'ny vozon'akanjo fanoherana ny hodi-kazo dia ny mety tsy hihinanan'ny alikantsika tsy tapaka intsony. Na izany aza, be dia be ny vokany ratsy izay mety hitarika amin'ny fampiasana vozon'akanjo hodi-kazo izay tena tsy manonitra ny fampiasana azy mihitsy.
Ny ankasitrahana indrindra mampiasa fepetra voajanahary sy mifanaraka kokoa hiantohana ny fiadanan'ny biby fiompinay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » Training » Tombontsoa / fatiantoka ary karazana vozon'akano-hoditra
Fa maninona ny alika no mampidina ny sofiny rehefa omeko azy ity